विदेशमै बन्यो युवाको कृषि सपना, गाउँमा भयो साकार - Artha Path Artha Path
म्याग्दी । ‘धेरै पैसा कमाउने सपना बोकेर इराक पुगेको थिएँ । सोचे जस्तो रोजगारी पाउन र पैसा कमाउन सकिँन । गाउँ फर्किएर बाख्रा पाल्ने योजना बनाएँ ।’ आफ्नो जन्मभूमिमा परिवारसँग बसेर व्यवसाय गर्दा सन्तुष्टिसँगै आनन्द पनि । बेनी नगरपालिका १ हुलाकेका नरबहादुर थापा मगरले अनुभव सुनाउनुभयो ।
अष्ट्रेलिया जान जुटाएको ३० लाख रुपियाँ मल्लले बाख्रापालनमा लगानी गर्नुभयो । ३०/४० लाख खर्चिएर विदेश जानुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा कृषिपेशा गरौं भन्ने सोच आएपछि बाख्रा पाल्न थालेको मल्लले बताउनुभयो ।
३० लाख लगानी गरेर तीन वर्ष अगाडि सुरु गर्नुभएको बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न पाइजा सफल हुनुभएको छ । यतिखेर उहाँको फर्ममा माउ बाख्रा,पाठापाठी र बोका गरेर ६५ वटा छन् । वर्षेनी करिब ९/१० लाखको बोका विक्री गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । विदेशमा भन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा परिश्रम गर्दा आनन्द आउँदोरहेछ पाइजाले भन्नुभयो ‘विदेशमा आर्जन गरेको पूँजी र सिकेको अनुभवलाई प्रयोग गरेको छु ।’
चार लाख रुपियाँको लगानीबाट सुरु भएको बंगुरपालन व्यवसाय यतिखेर करिब २५ लाख म्म लगानी भएको छ । पैसा कमाउने सपना बोकेर विदेश हानिएका युवा धमाधम गाउँ फर्किएर व्यवसायिक कृषि पेशा गर्न थालेका छन् । विदेशमा हण्डर खाएर गाउँ फर्किएका युवाले थालेको पशुपालन समाजमा नमुना भएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्रका पशु प्राविधिक सुवास रेग्मीले बताउनुभयो । विदेशबाट फर्किएरर एक युवाले थालेको कृषि पेशा समाजमा उदाहरणीय बनेका छन् । तिनै युवाको सिको गरेर अन्य युवा पनि कृषि पेशामा जोडिन थालेका छन् ।गोरखापत्रमा ठाकुरप्रसाद आचार्यको बाइलाइनमा समाचार छ ।
नेकपा बैठककै समयमा किन राखे प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठक ? दल विभाजन वा संसद विघटन हुनसक्ने !
काठमाडौं । गत शुक्रबारनै बुधबारको लागी नेकपाको सचिवालय बैठक तोकिए हो । मंगलबार दिनभरी राजनितीक
काठमाडौं । व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल बैंकले ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरको बिजनेस कर्जा योजना
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बैठक नसार्ने अडानपछि बालुवाटारमा यी नेताले ओलीलाई के सल्लाह देलान ?
काठमाडौं । मंगलबार दिउसो नेकपाको बैठक सार्ने प्रश्ताव लिएर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास
बादलले पनि छोडे ओलीको साथ, बैठक रोक्ने ओलीको सन्देश बोकेर प्रचण्ड भेट्न महासचिव पौडेल खुमलटारमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डविच